Sawirro: Weerar lagu gubay Xero ay laheyd Shirkad Kenyaan ah oo ka dhacay duleedka Mandheera.
Sunday December 22, 2019 - 15:40:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka NFD ee gummeysiga Kenya ku jira ayaa sheegaya in markale weerar hubaysan lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo Kenyaan ah.
sawir hore gaari ciidanka Kenya looga gubay Mandheera
Xoogag aad u hubeysan oo katirsan Al Shabaab ayaa weerar habeen dheelmad ah ku qaaday xero ay ku sugnaayeen ciidamo Kenyaanti ah iyo shaqaale dowladda u shaqeynayay, goobta weerarku ka dhacay ayaa ku dhow degmada Mandheera ee xuduud beenaadka dhacda.
War rasmi ah oo kasoo baxay Xarada SHM ayaa lagu sheegay in dagaal muddo kooban socday kadib ay ciidamada Kenya isaga firxadeen Xeradii weerarku ka dhacay kadibna ay 'Mujaahidiintu' la wareegeen gacan ku heynta xerada.
"Mujaahidiinta ayaa howlgal ay ka fuliyeen xero kutaal duleedka degmada Mandheera ee gobolka NFD waxaa ugu suurtagashay in ay la wareegaan gacan ku heynta xerada iyo dhammaan wixii yiillay" ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Al Shabaab.
Sawirro warbaahinta Kenya ay kasoo qaabtay goobta weerarku ka dhacay ayaa muujinayay gaadiidkii dhismaha xuduudda oo gabi ahaantiisba gubtay, saraakiisha dowladda Kenya waxay sheegeen in weerarkan uusan ka dhalan khasaara nafeed.
Wararka ayaa intaas ku daraya in xoogaga Al Shabaab ay gubeen Afar cagaf cagaf oo ay laheyd shirkad qaabilsan dhismaha xuduud beenaadka iyo sidoo kale Matoorro ay shirkaddu u isticmaalaysay dhisidda xuduudda.
Dadka deegaanka waxay sheegeen in ay sheedda ka arkayeen holac ka baxayay xerada lagubay, bishaan gudaheeda ayay xoogagga Al Shabaab weeraradii ugu badnaa uguna khasaaraha badnaa ka fuliyeen dhulka NFD.